प्रतिसेयर ९.३४ रुपैयाँले घट्यो नबिल बैंकको आम्दानी : वितरणयोग्य मुनाफा कति ? | शुभयुग
प्रतिसेयर ९.३४ रुपैयाँले घट्यो नबिल बैंकको आम्दानी : वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
७४८ पाठक संख्या
नबिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ।
आज (बुधबार) प्रकाशित विवरण अनुसार विवरण अनुसार बैंकको मुनाफा १६.५० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा हासिल गरेको छ। यो मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.५० प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ३ अर्ब १५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
बैंकको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि बृद्धि भएको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफामा पनि ८१.४८ प्रतिशतले बृद्धि भएर २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानीमा भने गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष यहि अवधिमा बैंकले ५ अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा यो बर्ष त्यो ५.०९ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।